Ronaldo oo laga saaray Liiska 10-ka Weeraryahan ee ugu shidan Yurub 2017/18 – Gool FM
Byare December 12, 2017
(Europe) 12 Dis 2017. Inkastoo Ronaldo goor dhaweyd uun loo caleemo saaray Ballon d’Or markii shanaad misane odeyga laguma soo darin liiska 10-ka weeraryahan ee ugu shidan Yurub xilli ciyaareedkan 2017/18.
Xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyay 4-gool oo qura horyaalka La Liga ilaa iminka 11 kulan uu ciyaaray.
Marka aad ka fikirto inuu saddex gool dhaliyay saddexdiisii kulan ee ugu dambeeyay waxay ku tusineysaa sida dansan uu ku bilowday kal ciyaareedkan.
Waxayna taa keentay in Ronaldo lagu soo dari waayo liiska Tobanka weeraryahan ee ugu fiican Yurub.
Waxaase Yaab leh in Qiimeyntan uu hogaaminayo dhaliyaha kooxda Manchester City ee Sergio Aguero iyadoo ay jiraan weeraryahano kale oo dhaliyay goolal aad uga badan.
Waxaa laga yaabaa inaad is waydiineyso haddii ay Ronaldo ka ja-jabneyd maxaa loogu soo dari waayay Liiskan Lionel Messi, Mohamed Salah, Neymar iyo Raheem Sterling, laakiin ku darso qiimeynta iyaga ma quseeso oo waxaa lagu daray Liiska xiddigaha Garabaha weerarka ee ugu fiican.
CIES Football Observatory oo ururisay xogtan ayaa soo saartay 10-ka weeraryahan ee ugu fiican 5-ta horyaal ee ugu waa wayn Yurub.
"Naga dhaaf Icardi ee la soo wareeg xiddigaan" - Ronaldo oo u sheegay Perez laacibka ay tahay inuu kooxda keeno bisha Janaayo